Soosaarayaasha Agar - Shirkadaha Agar & Agar Shiinaha
Fujian Global Ocean agar Agaraga Agar wuxuu u adeegsadaa Indonesia iyo Shiinaha dhirta badda sida ceyriin, taas oo ah walaxda dabiiciga ah ee laga soo saaro dhirta dhirta iyadoo la adeegsanayo habab cilmiyaysan. Agar waa nooc ka mid ah colloids-ka hydrophilic, oo aan lagu dhex milmi karin biyo qabow laakiin si fudud loogu milmi karo biyo la karkariyey oo si tartiib ah loogu dhex milmi karo biyo kulul. Fujian Global Ocean agar Agara wuxuu sameyn karaa jel xasilan xitaa xalka ka hooseeya 1%, sidaas darteed waa mid ka mid ah alaabta ceeriin ee muhiimka u ah warshadaha cuntada. Waxay noqon kartaa barnaamij ka wanaagsan ...
Fujian Global Ocean agar darajada daawada waxay u isticmaashaa Gelidium alaabo ceyriin ah, oo laga soo saaray habab aad u adag oo cilmiyaysan, taas oo ay muhiim tahay in la sameeyo beeroolajiga. Fujian Global Ocean agar agar waxay leedahay faa'iidooyinka heerkulka hooseeya, hufnaan wanaagsan, roob la'aan, iwm. –Bibteriological culti ...
Agar, oo loogu magac daray agar-agar, waa nooc ka mid ah polysaccharide laga bilaabo gracilaria iyo algae kale oo cas. Sababtoo ah jel gaar ah sameynta iyo astaamo caafimaad leh, waxaa si weyn loogu isticmaalay cuntada, dawooyinka, warshadaha kiimikada maalinlaha ah. Iyadoo lagu saleynayo agar caadi ah, Fujian Global Ocean Biotechnology Co, .Ltd waxay soo saartaa heerkulka hooseeya ee agar milmi kara oo leh teknolojiyad cilmiyeed. Waxay leedahay astaamaha xallinta fiicnaanta heerkulka hoose iyo xawaaraha miisaanka degdegga ah, way awoodaa ...